Ogaden News Agency (ONA) – Xidhay & Jidh-Dil Dad Shacab Ah Loogu Gaystay Ogadenia.
Xidhay & Jidh-Dil Dad Shacab Ah Loogu Gaystay Ogadenia.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka ogadenia ayaa sheegaya tacadiyo kala duwan oo ciidanka wayaanuhu ugaysteen dadka shacabka ah ee Somalida Ogadenia, warkan ayaan kahellay Wariyaha Wakaalada Wararka Ogadenya ee ONA uga soo warama Xarunta Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia JWXO.
Warkan ayaa intaas kudaraya in markay taariikhdu ahayd 22/5/16 Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob ay ciidanka wayaanahu kuxidheen dad aad ubadan waxaana magacyadooda hellay kuwan hoos ku xusan oo kala ah:-
1 nuuriye sh cumar
2 sareedo sh cumar
3 ardo maxamad budul
4 falxado maxamad budul
5 yuusuf muxumad budul
6 cabdi faarax budul
7 nimco cabdi sanyare
8 ugbaad bashiir
9 badri Mscalin aadan
10 Cabdifatax sh dayib
11 maxamad xuseen mataan
12 Ina caydiid maxamad lugay.
Waxaa kaloo uu warku sheegayaa in 22/5/16 Dagmada Iimaybari ee Gobolka Shabeelle waxay ciidanka gumaysigu kuxidheen labo muwaadin oo lagu kala magacaabo Shugri Tamaan iyo Cade Ibraahin Baadiye. Isla taariikhdan 22/5/16 waxaa Dagmada Marsin ee Gobolka Qoraxay ay ciidanka cadawgu ku xidheen Geedi Faarax Cabdi.
Sidoo kale 22/5/16 meesha lagu magacaabo Dhiita oo Dagmada Awaare ee Gobolka Jarar katirsan waxay ciidanka wayaanahu xidhay iyo jidh dil isugu dareen muwaadiniinta kala ah Faarax Gaydh Xassan iyo Maxamad cabdi jigre oo labaduba kamid ahaa Odayaasha Tuulada sidoo kale waxaa jidh-dil loogaystay dad badan oo shacab ah waxaana laga uruuriyay telephone nadii.
Dhanka kale maalinimadii Arbacada ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 25/5/16 Dagmada Birqod ee Gobolka Jarar waxay ciidanka gumaysigu xidhay iyo jidh dil isugu dareen dadka kala ah:-
1 xayi cabdi budul
2 Birqod cabdulaahi cumar
3 sacda sh bashiir xaaji Cabdishakuur oo umul ah
4 nimco sh bashiir xaaji Cabdishakuur oo xaamilo ah
5 suleekha sh bashiir xaaji Cabdishakuur oo umul ah.